Ei Phyo Lwin,along time Studer Trust teacher programme participant, isagreat example of how our Teacher Training Center (TTC) can not only help attendees improve their hard skills, but also gain new confidence, perspective and outlook in their abilities. Ei Phyo Lwin isateacher at Sasana Aung Myay Monastic School in Mandalay, and has attended nine TTC programmes, including the English Online Course, where she was awarded outstanding student. In all of her courses, she is known as an active learner that goes above and beyond the curriculum to research online. But it is in her personal growth that she truly has accomplished the most. We talked to Ei Phyo Lwin, who told us her story in her own words:
Asakid, I never experiencedalesson where teachers usedavariety of methods or integrated fun activities. Everything was taught directly and exactly from the textbook, and we were expected to memorize it. For example, during my high school, my English teacher pushed us to memorize everything and punished us when we failed to repeat it out loud. Despite my family always being supportive of my education and having won some awards when I was younger, this style of learning did not work for my high school education. Because of this, I did not pass. Foralong time, this made me feel small.
I definitely never imagined that I would becomeateacher. However, because of the need of my community, my abbot chose me to volunteer asaprimary school teacher. After two years, I had discovered that teaching was my passion. I love to teach and teaching always makes me excited. My students love me very much and it’s fun. However, I knew there were additional skills to learn, particularly to be able to start teaching students in higher grades. This is why I decided to start taking lessons with the ST-TTC.
During cohort training, Sayar Kolter taught us basic English. That was the first time that I clearly understood some usages and grammar patterns. TTC has changed mealot and helped support me to beaqualified teacher. After many practices and drills, I am now confident enough to planalesson. Sometimes, I can even plan the lesson phases mentally when I seeatext. After the training, whenever I teach the students I always provide extra information that I research from online, unlike before when I would only teach exactly what was in the text.
One specific goal I had was to be qualified to teach Grade 4. In our Lesson Plan Lab, we had to plan Grade4English lessons so that the teachers would be ready when school resumes again. I intentionally decided to take this training as I want to build my confidence level to teach middle level students. I love learning English too. Teacher Hnin, who used to teach Grade4students quit this year so I think I will be the next successor. If you asked me last year, I wouldn’t have thought myself ready to teach Grade4students. Now, even if people have doubts, I am confident enough to teach them when the school reopens again.
Finally, the TTC has changed other areas of my life as well. Asamonastic school teacher, I often have to go to the government offices to submit reports or get support for the school. Before, I never asked questions or expressed opinions in front of government school teachers. I was nervous to communicate with them and I always stayed quiet. TTC training completely changed me. It challenged me to test my ability to use my voice. After the training, I now can comfortably communicate with the office staff and ask questions if I have them. I am very satisfied with my personal changes.
At Studer Trust, it is our honor to be able to watch teachers like Ei Phyo Lwin thrive in and out of the classroom. We thank her for sharing her story with us and look forward to having her participate in TTC offerings in the future.
ဆရာမအိဖြိုးလွင် ကိုယ်တိုင်ဝေမျှပြောပြသည့် သူမ၏အတွေ့အကြုံများ
မအိဖြိုးလွင်သည် Studer Trust ၏ သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များတွင် အချိန်အတော်ကြာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဆရာသင်ကြားရေးစင်တာ (TTC) အနေဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားသူများအား စွမ်းရည်တိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်ရုံသာမက သူတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းများနှင့် ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိလာအောင် TTC က ကူညီပေးနိုင်ခဲ့သည်ကို အကောင်းဆုံး ဥပမာအဖြစ်ညွှန်းပြရမည့် သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ မအိဖြိုးလွင်သည် မန္တလေးမြို့ သာသနာ့ အောင်မြေ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာမအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး သူမအနေဖြင့် အထူးချွန်ဆုံးကျောင်းသားအဖြစ်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း အပါအဝင် TTC Program (၉)ခုကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သူမတတ်ရောက်ခဲ့သည့်သင်တန်းများတွင် သူမသည် သင်ယူဖို့ အမြဲ တက်ကြွနေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်ရိုးကို ကျော်လွန်ကာ အွန်လိုင်းတွင် လေ့လာရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိတတ်သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်တတ်ခြင်းသည် သူမအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း တိုးတက်မှုရှိခဲ့ကာ အခြားသောအရာတွေထက်သာလွန်၍ သူမကိုယ်တိုင် အမှန်စင်စစ် အောင်မြင်မှု အရရှိခဲ့ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မအိဖြိုးလွင်နှင့် စကားပြောဆိုကြည့်ခဲ့ရာမှာ သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူမ၏ အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင် ယခုကဲ့သို့ များပြားစုံလင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် ပျော်ရွှင်စရာ လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ဆရာ၊ဆရာမများက သင်ကြားခဲ့သည်ကို မတွေ့ကြုံခဲ့ရပါ။ သင်ကြားသမျှအကြောင်းအရာများသည် ဖတ်စာအုပ်မှတိုက်ရိုက် တိကျစွာသင်ကြားခဲ့သည်ချည်းသာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့အနေဖြင့် အလွတ်ကျတ်မှတ်ရရန် သင်ကြားပြောပြခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်မ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေသည့်ကာလအတွင်းတွင် အင်္ဂလိပ်စာဆရာသည် ကျွန်မတို့ကို စာအားလုံးအား အလွတ်ကျတ်မှတ်စေပြီး မကျတ်မှတ်နိုင်ဘဲ စာများအား မှားယွင်းဆိုပြမိပါက အပြစ်ပေးမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်မ၏ ပညာရေးနှင့် ငယ်စဉ်အခါက ဆုများ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကာ မိသားစု၏ ပံ့ပိုးအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သော်ငြားလည်း ယင်းကဲ့သို့ သင်ကြားမှုပုံစံသည် ကျွန်မ၏ အထက်တန်းပညာရေးအတွက် အဆင်ပြေမှုမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းအတွက်ကြောင့် အထက်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်အတော်ကြာကြာ ထိုကဲ့သို့သော ခံစားမှုမျိုးက ကျွန်မအား သိမ်ငယ်စေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မအနေဖြင့် ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု တွေးမြင်စိတ်ကူးထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်ငြားလည်း
ကျွန်မနေထိုင်ရာမှ လူနေမှုအဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်ရှိမှုများကြောင့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးက ကျွန်မအား မူလတန်းသင်ဆရာမအဖြစ် လုပ်အားပေးရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင် စာသင်ကြားခြင်းသည် ကျွန်မ နှစ်သက်သဘောကျသည့် အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေသိရှိခဲ့ပါသည်။
စာသင်ကြားရသည်ကို ကျွန်မနှစ်သက်မြတ်နိုးပြီး စာသင်နေရလျှင်ပင် ကျွန်မအနေဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေမိပါသည်။ ကျောင်းသားများကလည်း ကျွန်မကို ချစ်ကြပြီး ကျွန်မကကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ အရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းထက် ပိုမြင့်သည့် အတန်းတွေကို သင်ကြားရန် ကျွန်မအနေဖြင့် ထပ်လောင်း သင်ယူလေ့လာဖို့ အရည်အချင်းတွေလိုအပ်နေခဲ့မှန်း ကျွန်မသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပဲ Studer Trust ၏ TTC လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ တက်ရောက် လေ့လာသင်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပူးတွဲ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအတောအတွင်း ဆရာ Kolter က ကျွန်မတို့အား အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ အချို့သော အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအစွဲများနှင့် သဒ္ဒါ ပုံစံတွေကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ခဲ့သည်မှာလည်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။ TTC သင်တန်းများသည် ကျွန်မကို အတော်များများ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် ဆရာမတစ်ယောက်အဖြစ် အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။ များစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တော့ သင်ခန်းစာများကို အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲရန်အတွက် လုံလောက်သော ယုံကြည်မှုရရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် စာလုံးတစ်လုံးမြင်ရုံဖြင့် စိတ်ထဲတွင် စာကြောင်းတိုတစ်ကြောင်းကို အစီအစဉ်ချတတ်လေ့ရှိပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးပြီးမြောက်ပြီးနောက် ကျောင်းသားများကို စာသင်သည့်အခါတိုင်း ယခင်ကလို စာမှာ တွေ့ရသည့်အတိုင်း သင်ပေးခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အွန်လိုင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိရသည့် အခြားအချက်အလက်များကို ပြောပြပေးလေ့ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်မ၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ စတုတ္ထတန်းကို သင်ကြားရန် အရည်အချင်းပြည့်မီအောင်ကြိုးစားဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့၏ သင်ခန်းစာခန်းတွင် စာသင်ကျောင်းပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ ဆရာများ အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် စတုတ္ထတန်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာအတွက် ပြင်ဆင်ပေးရပါသည်။ ၎င်း လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ရခြင်းမှာ ကျွန်မအနေဖြင့် အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းသားများအားစာသင်ကြားဖို့ ယုံကြည်မှုတိုးတက်မြင့်မားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည်လည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရသည်ကို နှစ်သက်ပါသည်။ စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသားများကို သင်ကြားပေးခဲ့သော ဆရာမနှင်းသည် ယခုနှစ်တွင် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သွားသောကြောင့် ကျွန်မသည် နောက်ထပ် အောင်မြင်စွာ သင်ကြားပို့ချနိုင်သူ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ယမန်နှစ်က ကျွန်မကို ဤ မေးခွန်းမေးခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ကျွန်မအနေဖြင့် စတုတ္ထတန်းသင်ကြားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု တွေးထင်မိမည်မဟုတ်ပါ။ ယခုအခါတွင်တော့ အခြားလူများက သံသယရှိမည်ဆိုလျှင်တောင်မှ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ပါက စတင်စာသင်ကြားရန် လုံလောက်သည့် ယုံကြည်ချက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးသတ်အနေဖြင့်ပြောရသော် TTC လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသည် ကျွန်မဘဝ၏ အခြား အစိတ်အပိုင်းများကို ပြောင်လဲပေးခဲ့သည် ဟုဆိုရမည်။ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းတွင် သင်ကြားနေသည့် ဆရာတစ်ယောက်အနေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြရန် သို့မဟုတ် ကျောင်းအတွက် အထောက်အပံ့ တစ်ခုခုရယူရန် အစိုးရရုံးတွေဆီ မကြာခဏသွားရလေ့ရှိပါသည်။ ဤမတိုင်မီအချိန်များတွင်မူ အစိုးရစာသင်ကျောင်းက ဆရာ၊ဆရာမများ ရှေ့မှောက်တွင် မိမိ အကြံဉာဏ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်း သို့မဟုတ် မေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့ဖူးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်မသည် အမြဲတစေ ဆရာများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။ TTC လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသည် ကျွန်မကို လုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ အသံကို အသုံးချနိုင်မည့် စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု အနေဖြင့် သင်ကြားပြသပေးခဲ့ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးပြီးမြောက်ပြီးနောက်တွင် ရုံးအရာရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် သက်သောင့်သက်သာရှိစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေနိုင်ပြီး မေးခွန်းများရှိပါကလည်း မေးမြန်းနိုင်နေပါပြီ။ ကျွန်မအနေဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြောင်းလဲလာမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ အားရကျေနပ်မှုရှိပါသည်။
Studer Trust အနေဖြင့် စာသင်ခန်းတွင်းမှာလည်းကောင်း၊ ပြင်ပမှာလည်းကောင်း သင်ယူရန် စိတ်အားတက်ကြွနေတတ်သည့် မအိဖြိုးလွင်ကဲ့သို့ ဆရာမများအား တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ သူမ၏ ဘဝအကြောင်း ဝေမျှပေးခဲ့သည့် ဆရာမ အိဖြိုးလွင်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကာ နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း TTC မှ သင်ကြားပေးမည့် လေ့ကျင့်ရေး အတန်းများအား ပါဝင်တက်ရောက်ရန် မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။